Shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab iyo ISIS oo lagu toogtay Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandShan xubnood oo katirsan Al-Shabaab iyo ISIS oo lagu toogtay Boosaaso
Dagaalyahano ISIS ah. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Shan xubnood oo katirsan Al-Shabaab iyo ISIS ayaa waxaa toogasho ku fuliyay ciidamada Puntland, sida ay sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan.
Toogashada ayaa ka dhacday magaalo xeebeedka Boosaaso subaxnimadii Khamiista, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray.
Nimanka la toogtay ayaa horey maxkamadu ciidamada ugu heshay in ay dilal iyo qaraxyo ka geysteen gudaha magaalooyinka Puntland.
Puntland oo kutaala Gacanka Cadan oo u dhow Badda Cas, ayaa noqotay dowlad goboleed sanadkii 1998, waxayna ka badbaaday dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay, inkastoo ay hadda dagaal gula jirto xagjiriinta Al-Shabaab iyo ISIS kuwaasoo ku dhuumanay deegaano miyi ah oo kuyaala buuralayda gobolka Bari.
Garoowe-(Puntland Mirror) Gobolada Puntland ayaa wajahaya abaartii ugu xumayd muddo 15-sanno guddahood ah, sida ay sheegeen xoolo dhaqatada. Xoolo dhaqatada ayaa sheegaya in caws iyo biyo la’aanta ay sababtay in xooluhu ay dhintaan. “Xooluhu waa [...]